Kuwedzera kwemari: chii icho, chinoitwa riinhi, nezvimwe. | Ehupfumi Zvemari
Kuwedzera kwemari: chii icho, chinoitwa riinhi, nezvimwe.
Ehezve, kana iwe uri mudiki uye wepakati investor, iwe unozoziva kuti iyo capital kuwedzera inzira iri iyo iri zvakabatana zvakanyanya kumisika yemari. Kusvika pakuti iwe unogona kutowana mari kuburikidza neaya akakosha mashandiro. Ichokwadi kuti kuwedzera kwemari hakufanirwe kukanganisa makambani akanyorwa pamisika yemari. Ehe kwete, asi ndizvo zvatichazotarisana nazvo kubva zvino zvichienda mberi kuti iwe uzive zvaunofanira kuita nguva imwe neimwe yeizvi zviitiko zvemakambani zvinoitika.
Iko kuwedzera kwemari kwakanyanya kushanda kwezvemari kunoitirwa kuwedzera zviwanikwa zvekambani kuitira kuti ikwanise kubhadhara mari nyowani. Ndokunge, ndiko kuti, chinangwa charo chechokwadi chiri unganidza zviwanikwa kutarisana nezvido zvako zveupfumi, Kunyangwe mumisika yemari inogona kuve nedudziro yakapetwa kaviri ndiyo ndiyo kiyi yekuona kuti zvinobatsira here kana kuti kwete kune zvaunofarira semushambadzi wevatengesi Nekuti zviripo, mune dzakawanda zviitiko zvakaoma kwazvo kuziva kuti nei yakanyorwa kambani inowedzera kufamba kweaya maitiro.
Pakutanga, inogona kunge iri yezve chete zvido zvekudyara uye mune iyo mamiriro inogona kuita basa rinobatsira chaizvo uye kwaunogona kuwana mihombe mibairo. Kune rimwe divi, inogona zvakare kuve iyo nzvimbo yekuitira iyo capital kuwedzera kune zvemari zvinodiwa. Ndokunge, iwe hauna imwe sarudzo kunze kwekuenda kune ino accounting account kuti ugamuchire zviwanikwa zvemari nekuda kweiyo yakaipa bhizinesi mamiriro ekambani. Uye ichi ndicho chikonzero nei vachitambirwa zvakashata nemisika yemari. Nemutero wekutengesa pakutenga.
1 Kuwedzera kwemari: nei?
2 Ndeipi mhedzisiro?
3 Chii chinonzi mubairo wekutanga?
4 Kunyorera kurudyi
5 Makirasi ekuwedzera kwemari
Kuwedzera kwemari: nei?
Aya mafambisirwo emakambani anotumirwa kune accounting accounting yekambani pachayo. Iwe unofanirwa kuwedzera kunze kwenyika, kuwana mimwe mitsara yebhizinesi kana kunyangwe nekuti iwe unoda imwe mari yemari yako wega kurarama. Sezvauri kuona, kune zvakawanda zvinokurudzira kuzviita uye zvese zveakasiyana maitiro. Kune izvi vanogona kunge vakasiyana kududzirwa nevamiriri vemari Zvakanaka, iwe unofanirwa kugadzirisa kuti ndeipi chinangwa chekuvauraya, kunyanya mumisika yemari. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Chero zvazvingaitika, kuwedzera kwemari hakusi kungofamba mu market marketsInoenda kupfuura aya akasiyana. Nekuti hazvina kufanana kana kambani ine hutano ikaita mari inowedzera sekunge iri iyo yekupedzisira sarudzo iyo makambani anayo mune yakashata yemari uye accounting mamiriro. Kwete pasina, uye sekuziva kwako chaizvo ivo vanogamuchirwa nemadhigirii akasiyana ekushinga nevashambadzi vadiki nepakati. Hezvino izvo zvingaitwa nekuwedzera kwemari iva unobatsira uye pachinzvimbo imwe kwete. Kana zvirizvo chaizvo iwo akafanana mafambiro emakambani.
Munzira dzese, zvichave zvine mutsindo kuziva zvakadzama kuti ndezvipi zvakatorwa pane izvo zvinoitwa sekuwedzera kwemari. Nekuti zvinokupa imwe pfungwa kuti mafambiro ako aunofanira kuenda kubva panguva dzino chaidzo. Kwete pasina, isu tiri kutaura nezvekuwedzera kwemari kubva pakuona kwekudyara uye kwete kubva kune zvimwe zvakanangana kana zvehunyanzvi izvo zvinoitirwa kuti chii kuongororwa kwekambani. Zvakanaka, pamberi pekufamba kwehunhu uhwu hauna kana kusahadzika kwekambani inokanganiswa ichakwanisa kuwedzera capital pasi pemazano akati wandei akasiyana zvachose uye kuti isu tinokufumura pazasi.
Yekutanga uye panguva imwechete yakajairika pane zvese ndeye kuburitsa masheya matsva. Kunyangwe iine mbiri mbiri uye izvo ndezvekuti ivo vanogona kutariswa kune vatsva vagovana kana zviripo zviripo. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuverenga mamiriro ekuwedzera kwemari mune zvakadzama ruzivo kuti urege kuwira mukukanganisa kukuru kwaunogona kubhadhara zvakanyanya kubva zvino zvichienda mberi.
Imwe yemaitiro anoshandiswa nemakambani kuita mari yekuwedzera ndeye kuwedzera kukosha kwepara yezvikamu zviripo. Iri zano rebhizinesi ravanoshandisa zvakanyanya uye kazhinji nekuti inzira yekugadzira kukosha mukambani kana mubhizinesi.
Chechitatu chakavezwa nemutero ku purofiti isina kugoverwa yekambani. Izvi zvinorevei chaizvo? Zvakanaka, chimwe chinhu chakareruka sevaya vagovana havazofanirwe kupa mari uye nenzira iyi ivo vanogashira zvikamu zvakaburitswa. Ndokunge, yemahara zvachose uye kusvika pakuve basa rine purofiti mumabasa mazhinji anoshanda pasi pehunhu hwakakosha. Kwete pasina, haufanire kusangana nechero mari inobhadharwa uye unozokwanisa kuwedzera huvepo hwako kunevachagovana vekambani inobatwa nekuwedzera kwemari iyi.
Chii chinonzi mubairo wekutanga?
Chimwe chezvinhu zvakakosha ndeichi chine chekuita nenyaya yeprimiyamu uye izvo zvakakosha kuti unzwisise chaizvo kuti kukura kwemari chii. Mupfungwa iyi, unenge usina imwe sarudzo asi kuziva kuti iyo premium ndiyo iyo kubhadharisa kubhadhara zvechikamu zvine chekuita neicho zita rezita kana kukosha kwedzidziso. Saka iwe unoenda kuburikidza neiri bhizinesi zano kuburikidza nezvimwe zviito zvitsva. Kana kuti pamwe unogona kusimbisa zvinzvimbo zvako nezvimwe zvikamu zvakagadzirwa mushure mekutanga kwekuwedzera kwemari.
Kazhinji, kufamba uku kunoitwa kuburikidza neinozivikanwa sekodzero dzekunyoresa. Asi chii chaizvo? Zvakanaka, hapana chakaderera uye hapana chimwe chinopfuura chinhu chezvemari chauinacho chakati wandei pinda kana simbisa nzvimbo dzako mune kambani, inowanzo kuverengerwa sekuziva kwako. Hazvishamise kuti iko kunyoreswa kurudyi ndiko kunokutendera kuti unyore masheya matsva panguva chaiyo yekugadzirisa kuwedzera kwemubvunzo.
Huye, ichi chimiro ndicho chinokutendera iwe kutora zvitsva zvinzvimbo mukambani. Kunyangwe hazvo zvirizvo, kana iwe uchishuwira kusaenda kune iyo capital kuwedzera, hongu iwe hauzosungirwa chero nguva. Kana zvisiri, pane kudaro, unogona tengesa kodzero dzako pamutengo wemusika uye nenzira iyi iwe unozogona zvakare kuburitsa hupfumi kubatsirwa, kunyangwe zvichinyanya kushomeka uye mune chero zvazvingaitika pasina kujoina kambani kuburikidza nezviito zvitsva. Icho chimwe chekusahadzika kunorwisa makambani madiki nepakati nepakati apo kuwedzera kwemari kunoitwa zviri pamutemo. Iko kwavasingazive zvekuita nekodzero dzavo uye vanofanirwa kutendeukira kumabhangi avo kuti vatore danho mune izvi.
Kune rimwe divi, chimwe chezvinhu iwe chaunofanirwa kuongorora mukati meichi chakakosha chikamu chemubatanidzwa ndicho icho chine chekuita nemhedzisiro yekudzikiswa kwayo. Ndokunge, kuderera kwemutengo kwakatambura nezvikamu zvekambani yakabva mukuwedzera kwemari. Nekuti pakutanga usakahadzika kuti zvikamu zvakawanikwa kubva mukuwedzera kwemari zvinorasikirwa nemutengo wazvo. Kupfuura izvozvo yepakati nepakati Vanogona kukosheswa uye pamwe kunyangwe nenzira inogutsa kwazvo yezvaunofarira. Kunyanya kana zvasvika kune izvo zvinonzi zvinoda kusarudza kunyorera kodzero. Kunyanya kunakidza kunyorera mukuwedzera kwemari.
Makirasi ekuwedzera kwemari
Chekupedzisira, inguva yekuziva mhando dzekuwedzera kwemari dzinogona kuitwa. Uye kuti pane zvakawanda sezvauchaona pazasi sezvo isiri basa rakaenzana.
Ndima: ndipo mutengo wemubhadharo wemasheya matsva paunowirirana nemutengo wezita. Mune ino kesi, hapazove nesarudzo kunze kwekutenga kuburikidza nekutenga masheya matsva uye ndiyo pasipoti yekusvika pachikamu ichi chehurongwa.
Ndiina mukoma: mutsauko wavo uri muchokwadi chekuti mutengo wemutengo wakakwira kupfuura mutengo wezita. Uye izvo zvinotemerwa neinonzi issue premium.
Yakaburitswa: iyo yakaenzana neinokosha zita, asi kambani inoshandisa chikamu chechengetedzo dzayo dzinovaisa muhomwe. Kana iri yakabhadharwa zvizere mari inowedzera, ivo chete vagovana vagovana ndivo vachabhadhara. Kunyangwe pane izvo zvinopesana, kana chiri chikamu chakabhadharwa-kumusoro mari inowedzera, mupiro wechikamu chemugove unenge uchidikanwa.
Chero zvazvingaitika, panenge pasisina imwe mhinduro kunze kwekuongorora imwe neimwe yemari inowedzera kuratidza kuti basa racho rinobatsira here kana kwete. Izvo hazvizove ongororo yakapusa nekuti zvinoda ruzivo rwekuverenga kuti uone zvaunogona kuwana kuburikidza neichi chiitiko chekambani. Iwe unozotoda rairo yehunyanzvi mubhangi rako kuti ikupe iwo iwo marongero ekuita mukuwedzera kwemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kuwedzera kwemari: chii icho, chinoitwa riinhi, nezvimwe.
Chii chiri dhibhangi Dziva, semuenzaniso uye hukama hwayo neBhangi reSpain
Chii chinonzi digital banking?